Ingxelo ye-invoyisi
Basebenzisi abathandekayo, niyakufumana i-invoyisi yethu yorhwebo esemthethweni emva kokuthenga kwiChipsmall, nceda ufunde le miyalelo ingezantsi ngononophelo.
1, Umyalelo we-invoyisi ekhutshiweyo
I-invoice iya kukhutshwa yiChipsmall. I-Chipsmall ibonelela ngeendidi ezimbini ze-invoice, i-invoice ye-VAT (engaxhuzulelwanga) kunye ne-invoice ekhethekileyo ye-VAT (eDeductible) Ukuze kuphuculwe ukusebenza ngokukuko kwaye kuthintele ukubuya, i-invoyisi iya ikhutshwe kwiintsuku ezi-5 zokusebenza emva kokuba abasebenzisi befumene iimpahla. Nceda ugcwalise idilesi echanekileyo, umntu ekunokuqhagamshelwana naye, inombolo yefowuni ukuqinisekisa ukuba ii-invoyisi zingahanjiswa ngqo. Ukuba awugcwalisi olu lwazi, iChipsmall iya kuthumela i-invoyisi kwidilesi enye neempahla ezithunyelwayo, ukuze sikwazi ukunxibelelana nawe kwangexesha.
2, i-invoyisi ye-VAT
I-Chipsmall ihlala ikhupha i-invoice ye-VAT kubasebenzisi abahlawula irhafu ngokubanzi Nceda ubhale igama elifanelekileyo lenkampani kunye nolwazi lwerhafu kwi-invoyisi.
3, VAT invoyisi ekhethekileyo
Ukuba ufuna ukukhupha \_"i-VAT invoice ekhethekileyo\_", nceda unxibelelane ne-accounting yethu, kungenjalo inkqubo yeChipsmall iyakukhupha i-invoice ye-VAT.Sicela ugcwalise kwaye ujonge ngononophelo ngayo yonke imininingwane ye-invoice, iChipsmall ayizukuthatha xanduva ukuba kukho impazamo. ithunyelwe ngomntu ocacileyo emva kokuba uqinisekise ukuthunyelwa. Nceda ugcwalise igama lenkampani, idilesi, inombolo yefowuni, inombolo yerhafu, igama lebhanki kunye nenombolo yeakhawunti, idilesi yerisidi ye-invoice, ukuze abasebenzisi bakwazi ukusebenzisa i-invoice ekhethekileyo ye-VAT ngesiqhelo, kodwa lonke ulwazi oluzalisiweyo kufuneka lube ngokufanayo nomhlawuli werhafu.
Igama lenkampani kufuneka libe ligama lobhaliso lweshishini kunye norhwebo Idilesi yenkampani kunye nenombolo yefowuni ye-invoice kufuneka ifane kunye nolwazi lwenkampani yakho.
Inombolo yobhaliso lwerhafu linani elikwisatifikethi sobhaliso lwerhafu》, amanani ali-15 ngesiqhelo, nceda ujonge ngononophelo kunye negalelo. Igama lebhanki kunye nenombolo yeakhawunti mazibhalwe kuzo zombini.
Ukuba abasebenzisi babhala ulwazi oluphosakeleyo nge-VAT invoice ekhethekileyo, iChipsmall iya kukhupha i-invoice ye-VAT ngokuzenzekelayo, kwaye ngaphandle kokubuya.Chipsmall ayizukusamkela isicelo sokuphinda sikhuphe i-invoice ekhethekileyo ye-VAT, ukuba sele sikhuphe i-invoice ngokolwazi lwabasebenzisi.
5, isikhumbuzi esinobuhlobo
Ukuba unawo nawaphi na amathandabuzo malunga ne-invoyisi ekhutshiweyo, nceda unxibelelane neSebe lezemali le-Chipsmall Ukuba awufumani invoyisi kwiintsuku ezingama-30 emva kokufumana iimpahla, pls qhakamshelana nenkonzo yabathengi yeChipsmall. Asizukukhupha i-invoyisi okwesibini ukuba awukwazi ukunxibelelana nathi ngeentsuku ezingama-90 (ukusukela ngomhla woku-odola) .Igama le-invoice yemveliso iya kubhalwa ngezinto ze-Elektroniki, Inxalenye yenxalenye iya kubhalwa njengeodolo yokwenyani, akukho nasinye isicelo esikhethekileyo.
Nceda unxibelelane nenkonzo yethu yabathengi ukuba ufumanisa ukuba ulwazi lwe-invoice aluchanekanga ngokomyalelo, iChipsmall iyakuthatha indawo kwaye ithumele iarapones ezichanekileyo.Sicela unxibelelane nenkonzo yethu yabathengi ukuba ufuna ukutshintsha ulwazi lwe-invoyisi, siya kuthumela i-invoyisi ehlaziyiweyo kwidilesi yakho ebonisiweyo emva kwesebe lethu lezemali. Ngaphandle kwemvume yenkonzo yabathengi, isebe lethu lezemali aliyi kusamkela isicelo sokukhupha i-invoice kwifowuni, ifeksi okanye nge-imeyile.